पूर्व राजाको प्रश्न- हामीले अंगालेको राजनीतिको समीक्षा गर्न बिलम्ब भएन ? – Nepal Japan
पूर्व राजाको प्रश्न- हामीले अंगालेको राजनीतिको समीक्षा गर्न बिलम्ब भएन ?
नेपाल जापान २७ पुष १३:२४
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हामीले अंगालेको राजनीतिको समीक्षा गर्न बिलम्ब भइसकेको बताउनुभएको छ छ । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति एकताको गाँठो बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै जनचाहनाअनुसार अघि बढ्नु नै शाहवंशीय राजपरम्पराको विशेषता भएको स्मरण गराउनुभएको छ ।
उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, आफ्नो विचारमा राजनीति भन्नु नै देश सेवाको उच्चतम साधन हो । ‘तर हामीले व्यहोरेको राजनीति कति इमान्दार र राष्ट्रकेन्द्रित छ ? कति जनहित अनुकूल छ ? समीक्षा गर्न बिलम्ब भइसकेको छ ।
परिवर्तनका नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।